Torolàlana momba ny famolavolana sary sy fampisehoana | Famoronana an-tserasera
Ny famolavolana indostrialy dia karazany iray izay mifandray mivantana amin'ny endrika sary. Ohatra, ny iray amin'ireo base iraisan'izy ireo dia ny lanjan'ny sketch amin'ny maha-ivon'ny representation sy ny conceptualization azy.
Androany aho te-hizara aminareo ny boky iray tena mahaliana antsoina «Torolàlana amin'ny fanaovana sary sy fampisehoana ireo famolavolana vokatra» izay misy amin'ny endrika PDF ary maimaim-poana tanteraka. Ao anatiny, ny maha-zava-dehibe ny sketch sy ny sary amin'ny maha dingana fampandrosoana dia asongadino.
1 Famolavolana indostrialy: endri-javatra
2 Volavola sy sary: ​​Torolàlana momba ny sary
Famolavolana indostrialy: endri-javatra
Ny fahaterahan'ny famolavolana indostrialy ho fifehezana dia somary vaovao ary ny marina dia ny famaritana ny foto-kevitr'izy ireo sy ny fiantraikany dia voafaritra nandritra ny taona maro. Tsy azo ihodivirana fa manana lafiny indostrialy na matihanina kokoa izy io, nefa koa misy lafiny hatsarana miloko kanto. Androany ny fitsipi-pifehezanay dia misy faritra mamorona, kanto, ara-dalàna, miasa, ergonomika, sosialy ary ara-toekarena marobe.
Izy io dia misy akony amin'ny lafiny maro satria ny tanjony sy ny tanjony dia hanana toetra voajanahary mifamatotra amin'ny fanjifana, fampiasa ary ergonomika, nefa koa tanjona ara-dalàna sy an'ohatra, na dia ao ambadiky ny famolavolana aza dia misy ny fizotry ny fifanakalozan-kevitra, ny kabary ary ny enta-mavesatra lehibe. Ny fahaiza-mamorona dia milentika ao anaty ny fizotrany raha toa kosa ny fahamaroany, ny fahaizany miovaova ary ny maha-manjavozavo manome azy toetra amam-panahy maro karazana. Koa satria ao ambadiky ny asa sy ny tetikasa tsirairay dia misy ny olombelona amin'ny maha-mpampiasa azy sy farany azy, ny endrika dia ny lahatsoratra izay manome anton-javatra lehibe amin'ny maha-olombelona ary miaraka amin'izany dia maneho ny fifanakalozana ara-kolontsaina sy ara-toekarena.
Ny famaritana voalohany ny hevitra hoe "famolavolana" dia hita ao amin'ny Oxford Diccionary tamin'ny taona 1588, ao dia nofaritana ho toy ny drafitra na sary namboarin'olom-bitsy ho an'ny zavatra iray hatao. Sariitatra voalohany nalaina ho an'ny sangan'asa na zavakanto kanto ampiharina, ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa.
Volavola sy sary: ​​Torolàlana momba ny sary
Ny fandrafetana ireo tetik'asa sary, ary koa ny famaritana ny sangan'asa sasany, dia tsy afa-misaraka amin'ny sary na ny sary ho toy ny fitaovana savaranonando. Dingana eo anelanelany izay manampy antsika hitrandraka, hampivelatra ary hikolokolo ny hevitra voalohany. Na dia efa natsangantsika tamin'ny taratasy nentina tamin'ny pensilihazo, na sola, na inks na arina hatrizay, ity fanao ity dia nivoatra tamin'ny toeram-ponenana nomerika sy ny fampiasana takelaka sary sy solosaina izay azontsika atao sary amin'ny fomba tsotra sy fahazoana kalitao faran'izay tsara. Niteraka olana lehibe teo amin'ny vondron'ireo mpamorona izany ary maro no miatrika fahitana somary mampivadi-po. Sariitatra maro no milaza fa nanimba ny asan'ny mpanao sariitatra ny teknolojia vaovao, saingy mahaliana fa mila milaza isika fa lavitra ny fampahantrana ny maha-zava-dehibe ny fanaovana sary dia nanamafy izany izy ireo. Androany dia tena marimarina kokoa ny fampivelarana ny sarin'ireo vokatra ho avy amin'ny alàlan'ny rindrambaiko famolavolana sary ary na dia ny maodelim-paritra telo aza fa tsy izany ihany, fa maneho fotoana be dia be.
Amin'ny alalàn'ny fanaovana sary dia faritanay amin'ny endrika iray ny fampahalalana izay omen'ny hevitra abstract antsika. Ny maha-zava-dehibe ny sketch ho dingana iray amin'ny fizotrany dia zava-dehibe amin'ny zava-kanto rehetra hita maso, ao anatin'izany ny sary sokitra ary, etsy ankilany, ny maritrano izay, na dia tsy voarafitra tsara ao anatin'ny sehatry ny kanto aza, dia manaraka dingana iray mitovy amin'ny an'ny zava-kanton'ny sary rehetra. Ireo sketsa ireo dia nanjary fototra tonga lafatra hametrahana fifanakalozan-kevitra amin'ireo mpiara-miasa ary mazava ho azy miaraka amin'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'izy ireo dia azontsika atao ny manasongadina ireo lafiny mahaliana indrindra amin'ny volavolainay sy mamaritra ny toetrany. Fihetseham-po voalohany izay hanampy antsika hivoatra sy hanatsara ny hevitsika.
Noho io antony io, ny fanaraha-maso tsara ny sary dia tena zava-dehibe (na dia tsy tena ilaina aza) mba hisamborana ireo andalana voalohany amin'ny vokatra amin'ny fomba mailaka sy tsotra. Indrindra rehefa miasa amin'ny orinasa lehibe isika na manana asa marobe ary tsy maintsy manatrika famolavolana sy vokatra samihafa isika amin'ny fotoana iray, ny sary dia fomba filaharana voalohany. Amin'ireny tranga ireny, ny mpamorona dia maneho ny heviny haingana sy miaraka amin'izay amin'ny endrika tsotsotra sy tsikombakomba izay mampiorina ireo tena mampiavaka ireo hevitra. Ny dingana manaraka dia ny fanatanterahana sy ny famolavolana famotopotorana hahafantarana hoe inona avy ireo fitaovana ilaintsika ary inona koa ireo teknika hampiasaintsika hahazoana ny valiny tadiavintsika. Ny sary dia manome ny singa manome soso-kevitra izay mampihetsika ny eritreritry ny mpijery izay handray anjara tsy azo ihodivirana hanome izay tsy eo amin'ilay solontena. Izany dia mitaky fahatsapana manokana, izay mazava ho azy fa mivoatra amin'ny traikefa.
Azonao atao ny misintona ity boky ity avy amin'ireto rohy manaraka ireto: Torolàlana momba ny sary sy fampisehoana ny PDF Designs momba ny vokatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fanoroana sary sy famolavolana ny famolavolana vokatra